स्वास्थ्य/जीवनशैली « Dhankuta Khabar
आलेख: चित्त निर्मल पार्न चाहनुहुन्छ भने विपश्यना ध्यानको अभ्यास गर्नुस्
पौराणिक कालदेखि नेपाल तपोभूमिका रुपमा प्रसिद्ध छ । यस भूमिमा थुप्रै योगी, सिद्ध पुरुष र साधकले चिन्तनमनन गरी ज्ञान लाभ गरेका छन् । त्यसैकारण भारत वर्ष पूर्वीय दर्शनको आधारभूमि बन्न
अप्रिल २ तारिख ‘विश्व अटिजम जनचेतना दिवस’: के हो अटिजम ? यसबारे जनचेतना आवश्यक
काठमाडौँ, १९ चैत । आफ्ना बालबालिकाको शारिरीक र मानसिक विकास राम्ररी नभएको तथ्य धेरै अभिभावकले समयमै बुझ्न नसक्दा अटिजम रोगपीडितले भने जस्तो स्याहार पाउन सकेका छैनन् । साधारण बच्चाभन्दा अटिजम
फरक रक्त समूह भए पनि अब नेपालमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्भव !
जानिराखौं, युरिक एसिड हुने कारण र यसबाट बच्ने ८ उपाय
युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ। तर, युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ।
सत्र वर्षदेखि साङ्लोमा बाँधिएका लीला उपचारपछि घर फर्किए
सुरुङ्गा (झापा), १४ चैत । सत्र वर्षदेखि साङ्लोमा बाँधिएका बाह्रदशी गाउँपालिका– ३ राजगढका १९ वर्षीय लीला चम्लागार्इं उपचारपछि आज घर फर्किएका छन् । मानसिक सन्तुलन गुमेपछि लीलालाई उनका परिवारले विगत
भरतपुर अस्पतालमा एनआइसियु सेवा सबै निःशुल्क
चितवन, १२ चैत । भरतपुर अस्पतालले अस्पतालमा सञ्चालन भएको नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियु) को सेवा निःशुल्क गर्ने भएको छ । अस्पतालको सेवा विस्तारसँगै एनआइसियु सेवालाई निःशुल्क गर्न लागेको
चिकित्सकको लापरवाहीको कारण बिरामीको मृत्यु, मृतकका आफन्तले गरे क्लिनिकमा तोडफोड
लहान, ९ चैत । चिकित्सकको लापरवाहीको कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले आज सिरहाको बन्दीपुरस्थित एक स्वास्थ्य क्लिनिकमा तोडफोड गरेका छन् । अनुहारको डन्डीफोर हटाउने भन्दै मङ्गलवार स्थानीय राइन
‘शिप भए सफल हुन अपांगताले छेक्दैन’
धनकुटा खबर । धनकुटा पाख्रीबासका २९ वर्षीय जुना घिमिरे शिप भए आपांगता भएका ब्यक्ति पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छन् भन्ने धनकुटाका एक उदाहरण हुन् । १९ बर्ष पहिले खुट्टा सम्बन्धि अपांगता
होमियोपेथिकले गर्यो धनकुटाबाट संघर्षको उद्घोष ! : ‘अन्य चिकित्सा पद्दती सरह मान्यता देउ’
धनकुटा खबर, चैत ६ । होमियोपेथिक चिकित्सा पद्दतीलाई अन्य चिकित्सा पद्दती सरह मान्तता दिलाउन होमियोपेथिक केन्द्रिय समितिले धनकुटाबाट संघर्षको कार्यक्रम शुरु गरेको छ । होमियोपेथिक चिकित्सापद्दती अध्ययनका लागि राज्यले अनुमती
धनकुटामा सुली निर्यातमा १ महिना प्रतिबन्ध
धनकुटा खबर । छिमेकी जिल्ला सुनसरीमा वर्ड फ्लूको प्रकोप देखा परेकोले धनकुटा जिल्लामा एक महिनाको लागि सुली आयातमा प्रतिवन्ध गरिएको छ । कोशी पहाडी जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्धारको रुपमा रहेको धनकुटा